Home News Galmudug Oo Fariin Adag U Dirtay Xildhibaano Iyo Wasiiro Katirsan Dowlada Dhexe
Galmudug Oo Fariin Adag U Dirtay Xildhibaano Iyo Wasiiro Katirsan Dowlada Dhexe
Galmudug ayaa waxa ay sheegtay in weli ay taagan tahay faragelinta madaxda dowladda federaalka ay ku hayaan arrimo hoosaadka Galmudug, islamarkaana maalmahan uu bilawday abaabul hor leh oo loogu gacan haatinayo xildhibaanada Galmudug inay tagaan magaalada Cadaado.
Qoraal ka soo baxay Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay dowladda burburinta heshiiskii ay wada galeen Ahlu Sunna iyo Galmudug inay u adeegsaneyso Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo gaaray magaalada Cadaado, iyaga oo adeegsanaya dhaqaale fara badan.
Wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamed Aadan Cusmaan (Masagawaa) oo warbaahinta u aqriyay qoraalka ka soo baxay Galmudug ayaa wuxuu sheegay abaabulka xawliga ku socda wixii ka yimaada inay qaadanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
Galmudug ayaa ugu dambeyn madaxda mamul goboleedyada, beesha caalamka iyo IGAD ugu baaqday inay si dhaw ula socdaan xiisada taagan, islamarkaana ka hadlaan inta aysan waji kale yeelan.
Previous articleVideo:-Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Dowlada Ku eedeeyay Eex iyo sinaan la’aan dhanka Gobolada ah!!
Next articleXasan Sheekh Oo Dowladda Soomaaliya Ugu Baaqay Iney La Timaado Siyaasada Furfuran Oo Umada Soomaaliyeed Qancin Karta
Maxkamadda Gobolka Banaadir oo ka hortagtay Been ay Faafiyeen Qaaqlayaasha Villa...